Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Novana fototarazo ve no tsy manan-kery ny tanora tsirinaina?” nosoratan'i Hannah Devlin, siansa mpanao, fa amin'ny Alarobia faha-18 theguardian.com Febroary 2015 06.01 UTC
Tovolahy efa manana be dia be ny manahy: toerana, ankizivavy sy ny habeny ny "zavatra", araka ny Adrian Mole mety ho nataony. Ve ny olana ny tanora rehefa tsy manan-kery tsirinaina novana fototarazo tena mila koa io lisitra io?
Ny mpahay siansa ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge no nanolo-kevitra izany no izy rehefa manatanteraka ny fanadihadiana natao mihoatra noho ny 24,000 ray aman-dreny sy ny zanany. Ny fanadihadiana kely mifantoka amin'ny fototarazo sy ny fahasamihafana eo amin'ny ray aman-dreny taranany, izay noheverina ho vokatry ny fandikana diso tao amin'ny atody na ny tsirinaina sela.
Ny fandinihana dia mampiseho fa, eo ho eo, ray handeha eo enina, fara fahakeliny, ny isan'ny mutations ireo ny zanany toy ny reny. Izany dia midika order ADN dia tsy mahatoky ny ray replication ny fototarazo filaharany, angamba noho ny sela efa nandalo order fizarana kokoa noho ny vehivavy niforona ny fotoana mitranga ny kibo.
Ny manaitra kokoa milaza - ary ny olona izay nahazo ny saina indrindra - dia ny fahadisoany tahan'ny ao amin'ny tsirinaina sela ny tovolahy dia ny 30% ambony kokoa noho izany ho an'ny zatovolahy.
Ny mpikaroka hoe mety hanazava ny antony ray zanaky ny tanora manana aretina mety ho ambony kokoa toy ny autiste, schizophrénie sy spina bifida.
Ny mpanoratra ny taratasy, Peter Forster, nanao hoe:: "Zanaky ny 15 taona manana ny ankizilahy 30% mutations kokoa noho ny zanaky ny zatovolahy. Tena miendrika J fizarana. "
Izany angamba nandika ny mety ho am-bohoka ny momba ny 2% ny tovolahy, eo ho eo raha oharina amin'ny mety 1.5%, hoy izy:.
Hoy Forster: "Mety ho ny rafi-famokarana tsirinaina rehetra dia mora kokoa ny fahadisoana tamin'ny voalohany fotsiny ... fa tsy mbola optimisé."
Nilaza izy fa ny teoria mihitsy aza no nahatonga ny hevitra, ny mpanao gazety iray hafa, fa raha tovolahy masturbated kokoa, dia mety ho afaka miasa ny diany namakivaky io "suboptimal" vanim-potoana haingana kokoa.
Talohan'ny zatovo manaraka izany soso-kevitra (tsy efa be no manokana fotoana be dia be ho amin'izany asa?), ilaina na tsia mijery ny taratasy mihitsy, ao amin'ny Royal Society Journal adi B.
Ny zavatra hafahafa dia ny tsy fisian'ny tanteraka ny J miendrika curve. Ity ny kisary, izay mijery toy ny tsipika mahitsy ho ahy.
Germline p Open tahan'ny ho an'ny ray sy ny reny. Sary: Fizotry ny Royal Society
Marina fa ny angon-drakitra ho an'ny tovolahy teboka mampiseho ny kely dia mety kokoa noho maro mutations fa ny 20- ny 30 taona-taona isan-karazany, saingy mbola hita ny hifanindry amin'ny 95% matoky elanelam-potoana io ho an'ny Linear fironana. Tsy afaka mahita na inona na inona antony milaza fa "ny mikraoba sela ny tanora lahy dia ankoatra ny fahanterana fitsipika", tahaka ny mpanoratra atao.
Raha nandeha izy ka nidina izany lalana, Azonao atao koa ny mandeha hanontany tena hoe tsirinaina somary dodgy amin'ny 30, fa avy eo recovers indray ny fomba ny taona afovoany, satria toa ho Spike amin'ny 30-35 sokajy. Ny fanazavana tsotra dia ny angon-drakitra dia kely fotsiny tabataba.
Allan Pacey, mpampianatra momba ny andrology ao amin'ny Oniversiten'i Sheffield, manaiky: "Tsy misy dikany amiko. Tsy mahita miendrika J fifandraisana sy ny, eo amin'ny lafiny biolojia, Tsy afaka mieritreritra na inona na inona izay mety hanazava izany. "
Forster manondro mponina maro fampianarana, Soso-kevitra izay fa ny mety ho raim-pianakaviana tanora kokoa ny manan-janaka amin'ny aretina isan-karazany. Fa sarotra ny hoe vokatra toy izany raha mifandray amin'ny fototarazo mivantana antony ara-tsosialy sy ny tontolo iainana na ny anton-javatra. Ho ahy, ity farany fa tsy manao be studydoes mba hamaha ny olana. Araka ny ilazan'ny Pacey: "Tsy mahita be tokoa ho an'ny ray zatovo."
Ary ho an'ireo tovolahy izay tsy ray, angamba misy antony hafa mba hiandry mandra-20 taona mahery kely ny firotsahana amin'ny ray.